Si aad uhesho kaarkaaga, si aad u soo sheegto kaarka lumay ama la xaday, ama eeg sawirkaaga WIC:
Wac Khadka Gargaarka Adeegga Macaamiisha ee WIC 1-855-769-8890. Khadkani wuxuu furan yahay 24 saacad maalintiiba, 7 maalmood usbuucii.
Booqo Websaytka kaarka EBT
Wac adi xafiiska WIC ee degmada
Markaad ku hesho kaarkaaga elektaroonigga ee ku yaala kiliniga, saxeex gadaal oo aad sameysatid Lambarka Aqoonsiga Shakhsiyeed ee 4 ama PIN. Si aad u sameyso PIN, waxaad:
Wac adeegga macaamiisha ee WIC EBT 1-855-769-8890
Booqo Websaydhka WIC EBT (Waa inaad abuurtaa magaca isticmaalaha iyo furaha ereygaaga si aad u sameysatid xisaabtaada adoo dooranaya "Vermont" ka soo rogista liiska ee bogga kaadhadhka.
Markaad abuureyso lambar PIN, waa inaad haysataa Taariikhda Dhalashada, lambarka boostada iyo eLambarka kaarka WIC diyaar.
Markaad sameyso PIN, kaarkaaga eWIC wuxuu diyaar u yahay inuu ku isticmaalo dukaanka cuntada WIC ee idman.
Ogow xisaabtaada EWIC Kaarka Xisaabta
Bilowga bil kasta, xirmadaada cuntada oo dhammaystiran ayaa la heli doonaa. Si aad u hubiso dheelitirkaaga bil kasta, waxaad:
Call 1-855-769-8890 ama eeg bogga internetka https://connectebt.com/ (lambarka telefoonka iyo websiteka waxay ku qoran yihiin dhabarka kaadhkaaga eWIC)
Hubi dheelitirka dhammaadka risiidhkaada ka dib markaad iibsato cuntooyinka WIC.
Hubi dheelitirka bilowga ee Adeegyada Macaamilka ka hor intaadan dukaanka.
Liiska Cuntada iyo Hagaha Dalbashada
Guji hoos si aad u aragto liiska cuntada VICont WIC.
Eeg liiska cuntada
Riix hoose si aad u aragto Barnaamijka Vermont iyo Guide Guide
Eeg Tilmaanta Hantida
Fahmaan Waxtarrada Nafaqada
Waxyaabaha ku jira baakada cuntada ee WIC waxaa ku jira tiro gooni ah qayb kasta oo raashin ah. Tusaale ahaan:
4 gallon caano dufan yar (waxaad doorataa 1% ama dooxo iyada oo ku xidhan inta aad doorbidayso);
36 wiqiyadaha quraacda quraacda (aad doorato kuleyl ama qabow liiska la oggol yahay);
32 wiqiyadaha miraha oo dhan (waxaad ka dooran kartaa baakooyinka 16 ounce ee rootiyada qamadi oo dhan, bariis bunni ah, siriyaal dhan ama tortillas galley, ama dhammaan baastada qamadiga).
Kharashka miro iyo khudradda waa xaddi lacageed, tusaale ahaan: $ 8 loogu talagalay carruurta iyo $ 11 ee haweenka (waxaad ka dooran kartaa miraha cusub, barafaysan ama qasacadaysan)
Faahfaahinta dhammaan cuntooyinka ay oggol yihiin WIC ayaa laga helayaa Barnaamijka WIC ee WIC iyo Tusaha Cunnada. Eeg halkan ama ka soo qaado nuqul xafiiska WIC ee degaankaaga.
U hubso inaad iibsato cuntooyinkaaga WIC bil kasta oo koontadaada la xisaabiyo. Cuntooyinka aan la iibsanin "ma qabtaan" sidaa daraadeed hubi inaad iibsato dhamaan cuntooyinkaaga WIC maalinta ugu dambeysa ee bil kasta. Dhammaan xisaabaadka WIC ayaa "lagu soo gebogebeeyey" dhammaadka bisha.
Ku soo iibso kaarkaaga eWIC
Soo iibso waxaad u baahan tahay. Uma baahnid inaad iibsato dhamaan cuntooyinkaaga hal mar!
Kaarkaaga u diyaari si aad u hubiso.
Kala soo qaado kaarkaaga eWIC bilowga bilawga macaamilka.
Gali lambarkaaga PIN oo riix badhanka gelitaanka datada.
Qofka dukaanka qaada ayaa baari doona cuntooyinkaaga.
Qaddarka cuntooyinka la ansixiyey iyo qadarka lacagta ee miro iyo khudaarta aad iibsato waxaa laga jarayaa koontadaada WIC.
Khasnajigu wuxuu ku siin doonaa risiit kaas oo muujinaya dheelitirka manfacyada haray iyo taariikhda kaalmooyinka taariikhda dhacdey.
Waa muhiim inaad marwalba xusuusatid inaad iska wareejisid kaarkaaga eWIC ka hor inta aanad bixin noocyada kale ee lacag bixinta.
Miisaaniyada hadha ee soo hartay waxaa lagu bixin karaa lacag caddaan ah, EBT, SNAP, ama nooc kale oo lacag ah oo lagu aqbalo dukaanka.
PIN waa afar lambar oo qarsoodi ah, oo ay weheliyaan kaarka, u ogolaanaya helitaanka faa'idooyinka WIC. Marka aad dooratid PIN, dooro afar lambar oo fudud oo aad xasuusato, laakiin aad u adag tahay qof kale inuu ogaado (tusaale ahaan, dhalashadaada dhalashadaada ama ilmaha dhalashada).
Ha siin PIN-kaaga qof kasta oo aadan rabin inaad isticmaasho kaarkaaga. Haddii qof uu yaqaan PIN-kaaga oo isticmaalaya kaarkaaga si uu u helo gargaarkaaga cuntada adigoon fasax lagaa haysan, faa'iidooyinkaas lama beddeli doono.
Maxaa dhacaya haddii aan iloobo PIN ama aan rabo inaan bedelo?
Waxaad bedeli kartaa siyaabo dhowr ah oo PIN ah:
Booqo akoonkaaga internetka Connectebt.com
Wac lambarka bilaashka ah ee ku yaal dhabarka kaarkaaga eWIC.
Ka waran haddii aan galo PIN qaldan?
Ha isku dayin inaad ka fikirto lambarkaaga PIN. Haddii PIN-ka saxda ah ee aan la gelin iskudayga saddexaad, PIN-kaaga ayaa la xirayaa. Tani waxaa loo sameeyaa sidii looga ilaalin lahaa qof kugula talinaya PIN iyo helitaanka faa'iidooyinkaaga cuntada. Waxaa jira laba siyaabood oo loo furo kaarkaaga:
Wac lambarka bilaashka ah ee ku yaal dhabarka kaarkaaga eWIC
Sug ilaa ilaa saqda dhexe iyo xisaabtaada si toos ah u furi doonta